အိုးဝေ: January 2008
Posted by မောင်ဖြူ at 9:42 PM Links to this post 1 comments
သူတို့နယ်ဘက်မှာ ရွာတွေကနေ တောသူတောင်သားတွေက ဈေးဝယ်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လယ်ယာထွက်ကုန်တွေသွားရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် မြို့ဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာ လယ်ထွန်စက်ကို ထွေလာတပ်ပြီး မောင်းပြီးသွားကြပါတယ်။ မြို့ကို တစ်ပတ်မှ တခါလောက်သာ သွားတာပါ။ သွားရင်လည်း တရွာဝင်တရွက်ထွက်ပေါ့။ လမ်းကြုံတဲ့ရွာကလူတွေကလည်း ဒီထွေလာကိုစောင့်ပြီးစီးကြရတာပါ။ တရွာကလူနဲ့ တခြားရွာကလူတွေကလည်း ခင်မင်ရင်းနှီးနေကြတာပါ။ တနေ့မှာ မြို့ကထွေလာကြီး ပြန်အလာ၊ လမ်းဘေးက ယာခင်းမှာ တခြားရွာက လူရွယ်တယောက်က ပေါက်တူးပေါက်နေသပေါ့။ ထွေလာပေါ်က လူက သူ့ကို မြင်သွားတော့ကာ၊ ပြီး သူ့မှာလည်း ညီမအများကြီးရှိမှန်းလည်းသိ၊ ညီမတွေကိုစရင် စိတ်တိုမှန်းလည်းသိတော့
- “ယောက်ဖကြီး ပေါက်ထားဟေ့၊ ပေါက်ထားဟ” ဆိုပြီးအော်ပြီးစသွားတာပေါ့။
ဟိုလူရွယ်ကလည်း အရှိန်နဲ့သွားနေတဲ့ ထွေလာဆိုတော့ လိုက်လည်း မမှီနိုင်မှန်းသိလို့၊ ဒေါသထွက်လည်း ငြိမ်ခံနေရတာပေါ့။ သူအော်စပြီး ချက်ခြင်းပဲ ထွေလာကားဘီးက ဖောင်းဆိုပြီး အသံမြည်ပြီး ပေါက်ပါလေရော။ထွေလာလည်းရပ်သွားတော့တာပေါ့။ ထွေလာရပ်သွားတာကိုလည်းမြင်ရော၊ ဟို ကိုစိတ်တိုက ပေါက်တူးကို ဆွဲလာပြီး၊ ဒေါကြီးမောကြီးနဲ့ပြေးလာပါလေရော။
- “ငါ့ကို ယောက်ဖလို့ အော်သွားတာဘယ်ကောင်လဲကွ၊ ဆင်းလာခဲ့စမ်း”
အဲသတော့ခါ အော်ပြီးစမိတဲ့သူက မနေသာ
- “ဟေ့ကောင် ငါ့ညီမ မင်းကိုပေးမှာပါကွ “
အဲသလို ကြောက်လန့်တကြီး ပြန်ပြောလိုက်တော့ ဒေါသထွက်နေတဲ့လူလည်း ကြောင်တောင်ကြီး ဖြစ်သွားပြီး လှည့်ပြန်သွားရတာပေါ့။
ခင်ဗျားတို့လည်း သူငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကို ယောက်ဖကြီးဆိုပြီး ခေါ်ပြီး စတတ်တိုင်း ကိုယ်ကပဲ အမြဲရတာမဟုတ်ဘဲ ပြန်လည်းပေးရတတ်တယ်ဆိုတာ သတိရကြပါ။
Posted by ဇနိ at 2:06 PM Links to this post 1 comments
Posted by ဇနိ at 2:20 PM Links to this post2comments
ကျွန်တော်တို့ ဘက်မှာ `တ` နဲ့` သ` မပီတဲ့ ရွာတစ်ရွာရှိတယ်။ အဲဒီရွာက လူတစ်ယောက်နဲ့ အသိမိတ်ဆွေဖြစ်တော့ သူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြတယ်လေ။ ဒီလို… သူ့အမေက တစ်ခြားရွာမှာနေတဲ့ ဦးသောင်းတင်အိမ်ကို ပြောင်းဖူးမျိုးစေ့ သွားယူခိုင်းတယ်။ သူကအဲဒီရွာကို တစ်ခါမှမရောက်ဖူးဘူး။ ဘယ်နားမှာရှိတယ်…ဘယ်လိုသွားရတယ်ဆိုတာတော့ သိတာပေါ့။ အိမ်ကနေထွက်လာရင်း လမ်းမှာစဉ်းစားမိတာက ဦးသောင်းတင်အိမ်က ရွာရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းလား မြောက်ဘက်ပိုင်းလားဆိုတာ မမေးခဲ့မိဘူးလေ။ ဒီလိုနဲ့ ဦးသောင်းတင်နေတဲ့ ရွာကိုရောတော့…လမ်းမှာတွေ့တဲ့သူတိုင်းကို ဒီလိုမေးသတဲ့…´ဦးတောင်းသင် အိမ်က ဘယ်နားမှာလဲခင်ဗျာ´… သူ့အမေးကို ဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူး…ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီရွာမှာ ဦးတောင်းသင် ဆိုတာ ရှိမှမရှိတာကိုး။ ဒါနဲ့ သူလဲ စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ ရွာလယ်က ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ ခဏအနားယူနေတာပေါ့။ အနီးအနားမှာ ကလေးတစ်သိုက်က ကစားနေကြတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီမှာ ကလေးတစ်ယောက် လေးနှစ်အရွယ်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်တဲ့… သူထိုင်နေတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးး ´တူးတူး တားတားကို ကြက်တောင်ကွင်းပေးပါ`လို့ တောင်းတော့ သူ့လက်မှာရှိတဲ့ ကြက်ပေါင်ကွင်း ကိုပေးလိုက်တာပေါ့။ ဒါနဲ့ သူကလဲ အဲဒီကလေးကို `ဦးတောင်းသင် အိမ်ကို သိလား`လို့မေးတော့ ကလေးက `တိတယ်… ဦးတောင်းသင်က တားတား ဘဘ` ဆိုပြီးခေါ်သွားလို့ အဲဒီအိမ်ကို ရောက်ခဲ့ရတယ်တဲ့။
သူက တစ်ဆက်တည်းပြောသွားသေးတယ်… ဟေ့ကောင် ငါက သော်တလင်းလ ဒါမှမဟုတ် တသင်းကျွတ်ဆိုရင် မင်္ဂလာဆောင်မယ်တဲ့… အဲဒီအခါကျရင် သစ်ရွာလုံးကို ဗူးတီးနဲ့ဝက်တား ကျွေးမယ်ဆိုပဲ။
Posted by tmn at 3:49 PM Links to this post 1 comments
Posted by ဇနိ at 3:36 PM Links to this post2comments
Posted by ဇနိ at 5:04 PM Links to this post4comments
titanic ထဲကrose လို
24 percent သာပါလို့ပေါ့လေ။
Posted by ကိုလူအေး at 10:43 AM Links to this post2comments
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောဖူးတာပါ။ သူတို့ ရွာဘက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာလေ။ သူတို့ မူလတန်းကျောင်းမှာ ကျောင်းစောင့်တစ်ယောက်ခန့်ထားတယ်ပေါ့။ ကျောင်းစောင့်ဆိုပေမယ့် ညဘက် ကျောင်းမှာ စောင့်ရတာမဟုတ်ဘူး… ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ဆရာ ဆရာမတွေ မလာခင် ကျောင်းမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ်။ သောက်ရေအိုးတွေ ရေဖြည့်ရတယ်။ ဆရာ ဆရာမ တွေက ခိုင်းတာတွေကိုလဲ လုပ်ပေးရတယ်။ တစ်နေ့တော့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက အဲဒီလူကို တစ်ခြားကျောင်းတစ်ကျောင်းကို ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ သွားခိုင်းတာပေါ့။ ဒီတစ်ခါတော့ အခါတိုင်းထက်ပိုမြန်အောင်လို့ ဆိုပြီး စက်ဘီးယူသွားလို့ ပြောလိုက်တာပေါ့။ အမောင်ကျောင်းစောင့်ကလဲ ဘာမှမပြောဘဲ စက်ဘီလေးယူပြီး ထွက်သွားတာပေါ့။ တစ်နာရီလောက်ကြာတော့ ဆရာကြီးက စဉ်းစားတယ်… အင်း ဒီကောင် ဒီတစ်ခေါက် သွားတာ ကြာပလား… စက်ဘီများ ဘီးပေါက်နေလို့လား… စသည်ဖြင့်ပေါ့… ခဏနေတော့ အမောင်ကျောင်းစောင့် ပြန်ရောက်လာပါရော။ အခါတိုင်းထက်လဲ မောပန်းနေတဲ့ ပုံစံနဲ့ပေါ့။ ဆရာကြီးရှေ့ရောက်တော့… ဆရာကြီးက
- မင်း ဒီတစ်ခေါက်သွားတာ ကြာလှကြီးလားကွ။ ခြေလျင်သွားတုန်းက ပိုမြန်သလိုပဲ။ အခု စက်ဘီးလဲ ယူသွားပါတယ်။
- ဘာလို့ ကြာနေတာလဲကွ။ ဘီးပေါက်နေလို့လား။
- မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ။
- အဲဒါဆို ဘာလို့လဲ။
- ကျွန်တော် စက်ဘီးမစီးတတ်ဘူးခင်ဗျ။ ဆရာကြီးက စက်ဘီးယူသွားဆိုလို့ ယူသွားတာ။ စက်ဘီးကို တွန်းနေရလို့ ပိုကြာသွားတာပါ ခင်ဗျ။ မောလိုက်တာ ဆရာကြီးရယ်။ နောက်တစ်ခါ စက်ဘီးယူမသွားတော့ဘူး။ ခြေလျင်ပဲ သွားတော့မယ်။
Posted by tmn at 10:22 AM Links to this post3comments
ငယ်ငယ်တုန်းက စာပေဟောပြောပွဲကိုသွားပြီးနားထောင်တယ်။ လာပြီဟောပြောတဲ့ စာရေးဆရာ၊ဆရာမတွေက ဘယ်သူတွေလည်းဆိုတာလည်း မမှတ်မိဘူး။ ဘာတွေဟောပြောသလဲဆိုတာလည်း ကောင်းကောင်းမမှတ်မိပါဘူး။ စာရေးဆရာမကြီးတစ်ယောက်က “အရူးပါး” အကြောင်းကို ဟောပြောသွားတာလေးကိုပဲ မှတ်မိနေတယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံရှေ့က ကားမှတ်တိုင်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က နုိ့စို့အရွယ်ကလေးလေးကို ရင်ခွင်မှာပိုက်ပြီး လိုင်းကားကိုစောင့်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံထဲကနေ အမျိုးသားတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။ ၀တ်စားထားတာရော၊ ပုံပန်းသွင်ပြင်ကပါ ခပ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ပါ။ ကားမှတ်တိုင်ကို ရောက်တော့ကာ ရီဝေေ၀မျက်လုံးတွေနဲ့ အမေ့ရင်ခွင်မှာပိုက်ထားတဲ့ ကလေးလေးကိုပဲ ကြည့်နေတော့တာ။ ကလေးအမေ အမျိုးသမီးကလည်း အော် သူ့ခမျာ… သားသမီးစိတ်နဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းဖြစ်နေပုံရတယ်လို့တွေးမိနေတာပေါ့။ ခဏနေတော့ အဲဒီလူက စမေးတယ်။
- ကလေးလေးက ယောက်ျားလေးလား၊ မိန်းကလေးလား။
- ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ။ ဘယ်နှလ ရပြီလဲ။
- ၆ လသမီးပါရှင်။
- ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။
မျက်လုံးတွေကလည်း အရည်တွေလက်လာပြီး၊ မျက်နှာကြီးကလည်း ရွှင်လန်းလာတာပါပဲ။ အင်း ကလေးနဲ့သူ့ရောဂါတော့ ပတ်သတ်တာသေချာနေပြီ။
- တချက်လောက် နမ်းခွင့်ပေးပါလားခင်ဗျာ။
- နမ်းပါရှင်၊နမ်းပါ၊ နမ်းပါ၊ ရပါတယ်ရှင့်။
အဲသလိုလဲ ပြောလိုက်ရော နမ်းခွင့်တောင်းတဲ့ လူကြီးက ကလေးအမေ့ပါးကို ရွှတ်ခနဲမွှေးမွှေးပေးပြီးထွက်ပြေးသွားပါလေရော။
Posted by ဇနိ at 1:33 PM Links to this post4comments
နောင်လည်း သူငယ်ချင်းတွေက ပြောပြတာတွေရော၊ ဆရာဆရာမတွေက ပြောပြတာတွေရော၊ အမှတ်တရအဖြစ် ကြုံရင်ရေးဦးမှာပါ။
အကိုကြီးတစ်ယောက်က ပြောဖူးတာပါ။ သူတို့ကျောင်းပြီးတော့ အပြင်မှာနေပြီး အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ သူငယ်ချင်းတယောက်က နယ်ကနေ သူတို့နဲ့ အတူလာနေသပေါ့ဗျာ။ တနေ့ အကိုကြီးက ဟေ့ သူငယ်ချင်း ထမင်းအိုးလေးတလုံးလောက်ချက်လိုက်စမ်းပါကွာ။ ငါမအားသေးလို့။ ထမင်းအိုးဖင်လေးကိုရေသုတ်ပြီးမှ ပေါင်းအိုးထဲ့ထည့်နော်လို့ ပြောလိုက်သတဲ့။ ဆန်ဆေးတာတွေလည်း အသံတွေကြားတယ်။ ပြီး ဘေးမှာချထားတဲ့ရေခွက်ထဲကရေကို လက်နဲ့ နှိုက်ပြီး ထမင်းပေါင်းအိုးဖင်ကိုသုတ်နေသတဲ့။
- "ဟေ့ သူငယ်ချင်း ထမင်းအိုးဖင်ကို ဘာလုပ်နေတာလဲဟ"
- "ဟ မင်းပဲ အိုးဖင်ကိုရေလေးသုတ်ပြီးမှချက်ဆိုလို့ရေသုတ်နေတာကွ"
ကျနော်တို့လည်း ဒီလောကကြီးမှာ ထမင်းပေါင်းအိုးဖင်ကို ဘယ်လောက်များ ရေတွေသုတ်မိနေပြီလဲ မသိပါဘူးနော်။
Posted by ဇနိ at 1:48 PM Links to this post3comments
မော်စကိုတနေရာ၊ ည ၁၀ နာရီခန့်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၈၊၂၀၀၈။
Posted by ဇနိ at 12:21 AM Links to this post0comments
အစတုန်းကတော့ မပြောတော့ဘူးနေတာ။ သည်းခံနေတာ၊ 'အ'တယ်လို့ အထင်ခံရမှာစိုးလို့။ ဒီမှာလာပြောပြတာ။ လူမှုရေးလည်း နားမလည်ဘူး။ လေးခါတောင်ဗျာ။ လွန်လွန်းတယ်။ ဒီလို၊ သူငယ်ချင်းတယောက့်အကို မင်္ဂလာဆောင်မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုအခွေရလို့ ကျနော်က ကြည့်နေတာ။ မင်္ဂလာဆောင်ကို အားကျသလိုလိုဖြစ်လိုက်၊ ပြီး ကိုယ့်မှာ ယူစရာမရှိလို့ အားငယ်သလိုလိုဖြစ်လိုက် ဖြစ်နေတာ၊ သူကငြိမ်ငြိမ်မကြည့်ဘူး။ ဗွီဒီယိုအခွေထဲက ဟိုရေခဲမုန့်လေးကွာ စားချင်လိုက်တာတဲ့။ မျက်စောင်းတချက်ထိုးကြည့်တယ် နားမလည်ဘူး။ ဟာ ခွံ့ကျွေးနေတယ်တဲ့။ ဆက်ပြောတယ်။ အဟမ်း၊အဟမ်းလို့လုပ်တာ မရဘူး။ ငါ့အလှည့်ကျတော့လည်း ခွံ့ကျွေးမှာတဲ့။ ခက်တော့တာပဲ။ ရည်းစားလေးတစ်ယောက်ရသွားတာနဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်ကိုဖြစ်နေတာ။ ဟေ့ကောင် သိပ်မရူးနဲ့ကွာ၊ ငါ့လိုရည်းစားအများကြီးထားခဲ့ဖူးရင် မင်းဘယ်လိုနေမလဲ- လို့စိတ်ထဲကလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ မရဘူး၊ တဟီးဟီးနဲ့ ။ မျက်လုံးကြီးကလည်း အရည်တွေရွှမ်းနေတာပဲ။ အရောင်တွေကို လက်နေတာ။ သဘောတွေကျ၊ ကြည့်ရင်းနဲ့ စိတ်ကူးတွေကို ပိုက်ဆံမပေးရတိုင်ယဉ်ပစ်လိုက်တာနေမှာပေါ့။ ဟန်းနီးမွန်းပါတစ်ခါတည်း ထွက်လိုက်သေးတယ်ထင်တယ်။ ကျုပ်ကလည်း ငွေဆောင်မှာ ဒီကောင် ရေကူးရင် ရေနစ်ပါစေဗျာ-လို့ သောက်မြင်ကပ်လို့ ဆုတောင်းလိုက်သေးတယ်။ ဒီကောင်ရေမကူးတတ်တာ ကျနော်သိတယ်။ ဟေ့ မင်္ဂလာဆောင်လာတဲ့သူတွေကလည်း အ၀တ်အစားအသစ်တွေဝတ်လာတာဆိုတော့ ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ ကြည့်မကောင်းဘူးကွာ၊ ဆိုပြီး ပြောတာ အောက်သံ တချက်ပါတွဲထွက်လာတယ်။ အော် သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာနေမယ်ပေါ့။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တယ်။ သူက ဒီလောက်ကြီး လေဖောနေမှတော့ ကိုယ်လည်း လိုက်ဖောလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီး အေးကွာ ဆိုပြီး ပြောတာပေါ့။ ဟေ့ဟေ့ ဟိုမှာ ငါတို့ကောင်ကြီးဆိုပြီး နောက်တလုံကပ်ပါလာတယ်။ ဒီကောင်လွန်လွန်းပြီ။ သည်းမခံဘူးကွာ။ ငါ့အကြောင်းသိရမယ်ဆိုပြီး ရှာကြံစု၊ ကြိုးစားပြီးအောင့်ထားလိုက်တယ်။ ဒီတခါတော့ကိုယ်ကစပြီး- ဟာ ဟာ တို့ကောင်ကြီးကလည်းဝလို့၊ သူ့ကောင်မလေးကတော့ ပိုလှနေတယ်ကွလို့ ဦးအောင်ပြောပြီး စုထားတဲ့ တလုံးမသိမသာလွှတ်လိုက်တယ်။ အမယ် ကိုယ်တော့ချောက ဖော်လိုလိုက်တာများ မင်းကလည်း သူ့ကောင်မလေးက အရင်တုန်းကတည်းက အချောစားပါဟ ဆိုပြီး၊ မင်းလည်းဆော်တာပဲ အားမနာတော့ဘူးကွာ၊ ငါလည်း လွှတ်သကွာဆိုပြီးတော့များလား မသိဘူး၊ အောက်သံတချက်ပါအဖော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်လည်း မနေနိုင်တော့ တံခါးလေးထဖွင့်၊ တီဗွီနဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းကကုလားထိုင်လေးပေါ်သွားထိုင်နေရတယ်။ ဒါကိုမရဘူး ခဏနေတော့ ဟေ့ မောင်ဖြူရ လာပါဟ၊ တစ်ယောက်တည်းကြည့်ရတာ ပျင်းလွန်းလို့ပါ လို့ခေါ်တော့ သွားထိုင်ပါတယ်။ အခွေပြီးကြည့်ပြီးတော့ တစ်နေ့နေ့တော့ ငါ့အလှည့်ပေါ့ကွာ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို အကုန်စုံအောင်ဖိတ်ဦးမှာဆိုပြီ နှုတ်ဆက်ဘူလေးနဲထွက်သွားတယ်ဗျာ။
ဇာတ်လမ်းက ဒါပါပဲဗျာ။ သူလေးချက်ဆော်တာကို ကျနော်တချက်နဲ့ ပြန်သတိပေးတာ မသိသလိုလုပ်ပြီးနေလို့ ဒီကနေသတိပေးတာပါ။ မောင်လုံး မင်းကိုနောက်နေ့ကျ ငါလေးချက်ပြန်ဆော်မှာ။ အခုကုလားပဲတွေ ရေစိမ်ထားတယ်။ နောက်နေ့ မင်းတော့ နာပြီသာမှတ်။
Posted by ဇနိ at 12:19 AM Links to this post4comments
ကိုလူသွေးတစ်ယောက် ရူပါတင်ပို့ဆိုပြီး သမိုင်းလမ်းဆုံမှာရှိတဲ့ ဆံသဆိုင်ရှိရာကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ ကိုလူသွေး အဲဒီဆံသဆိုင်ကိုသွားချင်နေတာကြာပီ။ ရောက်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ကိုလူသွေးကို ဒီလိုပြောကြတာကိုး… အဲဒီဆိုင်က ခေတ်မီတယ်၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဆံပင်ပုံစံကိုပြောလိုက် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ညှပ်ပေးတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေ ကောင်မလေးတွေက ဆံသပေးတယ် စသည်ဖြင့်စုံလို့ပေါ့ဗျာ။ မူလရည်ရွယ်ထားတာကတော့ ဆံပင်ညှပ်ယုံပါပဲ။ ဆံသဆိုင်ရောက်တော့ လက်သည်းခြေသည်းပါ ပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုတော့ ကိုလူသွေး လက်ချောင်းခြေချောင်းလေတွေကို ကြည့်လိုက်တယ်။ ဟာ… လက်သည်းခြေသည်းတွေ ရှည်နေပါ့လား။ အင်း… တစ်ခါတည်း လက်သည်းခြေသည်းတွေပါ ပြုပြင်သွားမယ်လို့ စဉ်းစားမိတာပေါ့။ ကိုလူသွေးကို လူငယ်က ဆံသပေးတယ်။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က လက်သည်းခြေသည်း ပြုပြင်ပေးတယ်။ ဟဲဟဲ… ကိုလူသွေး ကောင်မလေးကို သဘောကျသွားတယ်။ ပြီးတော့ ကောင်မလေးကို တစ်နေရာရာမှာ ချိန်းပြီး စကားပြောဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ကိုလူသွေး။ ။ မိန်းကလေး ခင်ဗျားနာမည်လေးပြောပြလို့ရမလား။
မိန်းကလေး။ ။ ကျွန်မနာမည် မဏီစန္ဒာပါရှင်။
ကိုလူသွေး။ ။ အင်း ငါ့နာမည်… ကျန်စစ်သားလို့ပြောင်းရရင်ကောင်းမလား… စိတ်ထဲမှာ စဉ်းစားနေတာ… မဏီစန္ဒာ ဒီညအချိန်ရရင် ကျွန်တော် ညစာ ဖိတ်ကျွေးချင်လို့ပါ။ တစ်နေရာရာမှာပေါ့ဗျာ။
မိန်းကလေး။ ။ အို… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…. ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းပါတယ်ရှင်… ကျွန်မ ရှင်နဲ့အတူ ညစာ မစားနိုင်ပါဘူး… ကျွန်မမှာ ချစ်သူရှိတယ်။ ကျွန်မချစ်သူ သိသွားရင် စိတ်ဆိုးမှာပေါ့ရှင်။
ကိုလူသွေး။ ။ ဟာ… ခင်ဗျား ကျွန်တော်နဲ့ ညစာ စားလို့ရပါတယ်… ပြဿနာမရှိပါဘူး… ခင်ဗျား ချစ်သူဆီကို ဖုန်းဆက်ပြောလိုက်ပေါ့ … ဒီည ကျွန်မ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ညစာ အတူသွားစားမယ်လို့။
မိန်းကလေး။ ။ ကျွန်မချစ်သူဆိုတာက အခု ရှင့်ကို ဆံပင်သပေးနေတဲ့သူ။ သူ့ကို ရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ပြောလိုက်ပေတော့။
Posted by tmn at 4:17 PM Links to this post 1 comments
Posted by ကိုလူအေး at 10:42 PM Links to this post2comments
ရှေးစာဆို ရှင်ငြိမ်းမယ် ရေးခဲ့တာကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီစာသားကို သီချင်းအနေနဲ့စပြီး နားထောင်ဘူးတာပါ။ သုတရသ ပေးတဲ့ ဒီစာသားလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး။
သီးဖော်ရယ်မှ သီးဖက် အပင်ထက်မှာ
တက်တက်စင် မီးကင်သည့်နှယ် (ကွဲတတ်တယ်)
အမယ်မှာ နတ်ပန်းပွင့်တဲ့ အတင့်ငယ်မှ (ရဲချင်)
ပျော်လိုအားနဲ့ ခေါင်းဖျားတင် အရင်လူနဲ့
Posted by tmn at 1:47 PM Links to this post0comments
Posted by tmn at 12:29 AM Links to this post4comments
Posted by ဇနိ at 2:48 PM Links to this post0comments
ယောင်္ကျားဖြစ်သူ မှာ မြို့ထဲကနေပြန်လာပြီး ၀မ်းသာအားရနဲ့ အိမ်ထဲကို ပြေးဝင်လာတယ်။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ချက်ပြုတ်နေတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူကို ခေါ်လိုက်ပြီး…
ယောကျာင်္း။ ။ ငါ ဒီနေ့ တော်တော်ကောင်းတဲ့ အလုပ်သစ်တစ်ခုကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ အလုပ်က နံနက် ရှစ်နာရီကနေ ညနေ ငါးနာရီ အထိလုပ်ရမှာ။ နံနက်တစ်ကြိမ် ညနေတစ်ကြိမ် ကော်ဖီ တိုက်မယ်။ နေ့လယ်စာ စားချိန်ကို တစ်နာရီပေးထားတယ်။ လုပ်ခကလည်း တော်တောများများရမှာ။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကလည်း အခမဲ့ကွ။ ပြီးတော့ အားလပ်ရက်ကို သုံးပတ်ပေးထားတယ်။ အဲဒီအလုပ်ကို လက်ခံသင့်တယ်မဟုတ်လား….မင်းဘယ်လိုထင်လဲ။
ဇနီး။ ။ အိုး… တော်တော်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲ… လက်ခံသင့်တာပေါ့။ ရှင် ဒီလိုအလုပ်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တာ ကျွန်မဖြင့် အရမ်းပျော်တာပဲ။
ယောင်္ကျား။ ။ ကောင်းပြီ…. မင်းလက်ခံတယ်ဆိုရင် မနက်ဖြန်ကစပြီး အလုပ်ဆင်းလို့ရပြီ။
Posted by tmn at 11:45 PM Links to this post0comments
မငိုဘူး ဆိုပေမဲ့... ငါ...
Posted by ဇနိ at 6:36 PM Links to this post 1 comments
Posted by ကိုလူအေး at 1:09 AM Links to this post3comments
Posted by ကိုလူအေး at 11:47 PM Links to this post2comments
Posted by ကိုလူအေး at 12:18 AM Links to this post4comments
တစ်တက်စားလည်းကြက်သွန် နှစ်တက်စားလည်းကြက်သွန် မထူးတော့ဘူးထင်ပါရဲ့။ အဲဒီတော့ လူအေးလည်း မထူးဇာတ်ခင်းလိုက်ပါတော့မယ်လေ။ စာဖတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်း ဒီblogက ငနာတွေအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိချင်ရှာမယ်ထင်တာပဲ။ အဲဒီတော့ စာဖတ်ပရိတ်သက်အတွက် လူအေး အဆဲခံအဆိုခံပြီး ဒီအကြောင်းတွေကိုရေးလိုက်တော့မယ်။ ဒီသုံးကောင်ရဲ့ပုံစံကိုပေါ့။ အစချီရရင် လွန်လေပြီးသော ၁၀နှစ်ခန့်က လို့ဆိုရမယ်။
လူအေးတစ်ယောက် “နေပူ လေတိုက် မြွေပွေးကိုက်သည် လူမိုက်နေသည့် အမ်အိုင်တီ” ဆိုတဲ့ ကျောင်းရဲ့ ပထမဆုံးလက်ချာချိန်ကို သွားမလို့။ အဆောင်ပေါက်ဝမှာ မအူမလည်နဲ့ လူတွေကို အကဲခက်ကြည့်နေချိန်ပေါ့။
အခန်းတစ်ခန်းထဲကနေ လူတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်…။ ဘုရားဘုရား နားထဲမှာ စည်တော်ကြီးတီးသံတွေဘာတွေတောင် ဆူညံသွားတယ်ထင်တယ်။ သူ့ပုံစံက အသားကဖြူဖြူ၊ အရပ်ကမြင့်မြင့်၊ ကော်တွေဂေါက်ဂေါက်ထနေတဲ့ စတစ်ကော်လံအကျီဖြူ ကိုဝတ်ထားတယ်၊ ပုဆိုးကအင်းပုဆိုးနဲ့ (လူးအေးတို့အရပ်မှာ သတို့သားဝတ်တဲ့ပုဆိုး)၊ မျက်နှာကလည်း ဖွေးဥလို့ ဂျုံမှုန့်တွေသုပ်လာသလိုလို၊ လွယ်အိပ်ကိုလည်း ဘေးတစောင်းလေးလွယ်လို့၊ ဘိုကေကိုပြောင်နေအာင်ဖြီး၊ အဲ…ညာဘက်လက်မှာ ဗေဒင်ဆရာတွေဆောင်းတဲ့ ထီးအနက်တစ်လက်ကိုလည်း ကိုင်ထားတယ်၊ လမ်းလျှောက်ပုံကတော့ ယောက်ျားတို့ အိနြေ္ဒ ရွှေပေးလို့မရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ…. ဟိုက်ရှားပါး တကယ့်ရှေးခေတ်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားစတိုင်နဲ့။ သူ့ကိုငေးကြည့်နေတုန်း အနားကိုရောက်လာလို့ပြုံးပြလိုက်တယ်။ အံမယ် ကိုတယ်တော်ချောက နောက်ချေးကားနဲ့ လင့်ခရူစာ တိုက်မိမှာစိုးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ လူကို မသိချင်ယောင်တောင်ဆောင်သွားသေးတယ်….။ အဲဒါဘယ်သူလို့ထင်တုန်း… အဲဒီကောင်က ဒီblogက မောင်ဖြူ။
အဲ လူအေးလည်း အဲဒီကောင်ကို လိုက်ငေးကြည့်နေပြီးမှ အဆောင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အနားမှာ နောက်တစ်ယောက်လမ်းလျောက်လာတာ သတိထားမိတယ်။ သူ့ပုံစံက ဆံပင်စုတ်ဖွား။ အင်္ကျီ င်္အနွမ်းကိုဝတ်ထားတယ်။ ဆေးပေါ့လိပ်တိုကို ဖင်ပြားသွားအောင်တောင် ကိုက်ခဲထားလေရဲ့။ ပုလင်းကွဲဖင်လောက်ထူတဲ့ လေးထောင့်မျက်မှန်ကို တပ်ထားပြီး၊ ၀တ်ထားတဲ့ ပုဆိုးအကွက်က တစ်ကွက်နဲ့ တစ်ကွက် ခြောက်လက်မလောက်ကျဲတယ်။ ပုဆိုးကိုမြင်ယုံနဲ့တင် ဆက်ဆံရေးကျဲမယ့်ကောင်ဆိုတာ သိသာတယ်။ မျက်နှာကလည်း သုန်မှုန်လို့။ တစ်လောကလုံးကို သူတင်ကျွေးထားရတဲ့ပုံစံနဲ့လေ။ အနားရောက်တော့ လူကိုမျက်မှောင်ကုတ်ကြည်သွားတယ်။ အောင်မလေးတော်သေးလို့ အမြင်မတော်ဘူးဆိုပြီး ဆွဲထိုးမသွားလို့။ ပုံစံကိုက လုပ်ချင်တာလုပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက စာရေးဆရာရုပ်နဲ့။ အဲဒါဘယ်သူထင်တုန်း… အဲဒီကောင်က ဒီblogကိုထောင်တဲ့ ဇနိဆိုတဲ့ကောင်။
လူအေးလည်း ရင်တစ်မမနဲ့ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင် အပေါ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးလေချွန်နေလိုက်တယ်။ ခဏနေ ရှေ့တည့်တည့်ပြန်ကြည့်မိတော့ ကမ္ဘာကြီးက (slow motion) နဲ့လည်နေသလိုလို ခံစားရတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆို မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးနဲ့ ပြန်တွေ့လို့ပြေးဖတ်တဲ့အခါမှာ ပြတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ။ ငနဲတစ်ကောင်က အခန်းတံခါးပိတ်နေပုံလေ…မင်းတုန်းကိုဖြေးဖြေးလေးထိုး၊ သော့ကလေးကို အသာလေးသွင်းပြီး ညင်ညင်သာသာလေးခတ်။ ပြီးတော့ပုဆိုးလေးပြင်ဝတ်၊ ခေါင်းကိုငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက်နဲ့ လမ်းလျောက်လာတယ်။ လူအေးလည်း အတန်းတတ်ဖို့ ၁၀ မိနစ်လောက်ပဲလိုတော့တာဆိုတော့ အဒီငနဲကောင်နဲ့ လမ်းအတူလျှောက်လာတယ်။ လူအေးကိုလည်း ဘေးမှာရှိတဲ့ပုံ သဘောမထားဘူးထင်ပါရဲ့။ လူအေးက လူမှုရေးဘာသာရပ်ကို ဂုဏ်ထူးထွက်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ စပြီး မေးခွန်းလေးနဲ့ အဲဒီကောင်ကို နုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ “ငါတို့ ပထမဆုံးစာသင်ချိန်က ဘယ်အခန်းမှာလဲသိလား” လို့ သိသိကြီးနဲ့မေးလိုက်တယ်။ လူအေးကို ခပ်ဆွေးဆွေးလေးစောင်းကြည့်တယ်၊ ပြုံးလည်းမပြဘူး။ သူ့လမ်းသူဆက်လျောက်တယ်။ စာသင်ဆောင်နားရောက်တော့(မေးခွန်းမေးပြီးတာ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာမှ) “ဒီ T-2 အဆောင်မှာလေ” ဆိုတဲ့အဖြေရတယ်။ အောင်မလေးနော် လူအေးတို့ အပြတ်အသတ်ကိုစိတ်ညစ်သွားပါလေရော။ မေးတဲ့လူ ကိုယ့်မေးခွန်းကိုယ်မေ့သွားလောက်တော့မှ ပြန်အဖြေပေးတဲ့အကောင်။ အဲဒီကောင်ကို မောင်လုံးလို့ခေါ်တယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီး ပျင်းတယ်ဆိုရင် ကျောက်ဆစ်ရုပ်နဲ့ စကားသွားပြော။ အဲဒီကောင်နဲ့ပြောလို့ကတော့ ပါစပ်သာအမြှုပ်ထွက်သွားမယ် ပြန်စကားတော်တော်နဲ့ မရဘူး။ လူကသာ(process) နှေးတာ (Parallel Computing)မှာတော့ အဲဒီကောင်ဆရာကြီးရယ်။ ဟိုတစ်နေ့ကတောင် သူများအတွက် ပရိုဂရမ်ရေးပေးနေတာတွေ့တယ်။
(မှတ်ချက်။ ။ ဒီpost တင်ပြီးကတည်းက တစ်ခြားကျောင်း အလည်သွားသည်။)
Posted by ကိုလူအေး at 1:13 PM Links to this post 10 comments
ကျုပ်တစ်ကောင်တည်း တချောက်ချောက်နဲ့ လမ်းလျှောက်နေတာ။ ဗိုက်တင်းလို့လည်းပါတယ်၊ အညောင်လည်းပြေပေါ့ဆိုပြီး လမ်းလျှောက်တာ။ ဝေးဝေးလံလံလဲ ဟုတ်ပါဘူး။ ကျုပ်နေတဲ့ နားဝန်းကျင်ပါပဲ။ ဘေးဘီကိုလည်း လှည့်မကြည့်မိပါဘူး။ ဒီအချိန်က သူတို့တွေ ကျောင်းသွားကြတဲ့အချိန်ပါ။ ကျုပ်အလုပ်ကလည်း ဒီအချိန်ဆို အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ အော် ဒီမှာနေလာတာပဲ အတော်ကြာပါပြီ။ မူရင်းဇာတိကတော့ အခုနေတဲ့ နေရာနဲ့ အတော်ဝေးကွာတဲ့ စတိုခန်းတခုမှာနေတာပါ။ စတိုခန်းထဲမှာ အိပ်ရာခင်းတွေ၊ စောင်တွေ၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါတွေထားတာ။ ပြောပါတော့ တက္ကသိုလ်အဆောင်ကို ကျုပ်နိုင်ငံလို့ပဲ။ ကျောင်းသားတွေရော၊ ကျောင်းသူတွေပါ အတူနေကြတဲ့အဆောင်တခုပါ။ စတိုခန်းထဲမှာ ၀ါရင့်ကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ စစ်ပြန်ကြီးပေါ့။ သူပဲ တော်တာလား၊ ကံကပဲဖေးမသလား မသိဘူး။ သူက ကျောင်းသူခန်းလဲရောက်ဖူးတယ်။ ကျောင်းသားအခန်းလဲ ရောက်ဖူးတယ်။ အခေါက်ခေါက်အခါခါ စတိုခန်းကို ပြန်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့၊ အသက်ကြီးသူတွေကို ဂါရ၀ပြု။ နောက်ဆုံးတော့ သူလည်းအသက်ကြီးလာ။ သိပ်မသွက်လက်တော့ကာ သူ့အတွေ့အကြုံအရတတ်လာတဲ့ ပညာတွေကိုနောင်လာနောက်သားတွေကို ဖြန့်ဝေတော့တာပေါ့။ ပြီး သူပဲ ကျုပ်တို့ကို ဘယ်သူကဘယ်သွားပေါ့လေ၊ စီမံခန့်ခွဲတာ။
အဖေအမေကိုလည်းဝါးတားတားပဲမှတ်မိတော့တယ်။မွေးပြီး ကြာကြာတွေ့လိုက်ရတာမှ မဟုတ်တာ။ ညီအကိုအရင်းအချာတွေဆိုတာလည်း ဘယ်ဆီရောက်လို့၊ ဘာတွေဖြစ်နေကြပါလိမ့်။ မွေးတာကလည်း တစ်ပြုံကြီးဆိုတော့လေ။ သေတဲ့သူတွေလည်းသေကြရောပေါ့။ ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာက တစ်လကို အိပ်ရာခင်းတွေ၊ စောင်တွေ၊ ခေါင်းအုံးစွပ်တွေကို တလမှာတခါ လဲပေးတယ်ဗျ။ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေကလည်း လဲကြပါတယ်။ ကျုပ်တို့မွေးလာပြီး အရွယ်လေးအတော်ရောက်တော့ စစ်ပြန်ကြီးက လက်ချာတွေစပေးတော့တာ။ လမ်း ဘယ်လိုလျှောက်ရမယ်။ အနံ့ဘယ်လိုခံရမယ်ဆိုတာ။ ပြီးရင် လူသံကြားရင် အလျင်အမြန်ဘယ်လို ပုန်းရတယ်၊ ဘာညာပေါ့။ ပြီးရင် ကျုပ်တို့ အပြီးပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ အလည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ပြန်လာမယ်ဆိုရင် စောင်ကြား၊ ခေါင်းအုံးစွပ်ကြားဘယ်လို ပုန်းရမယ်ပေါ့။ အသေအချာ သင်ပေးပါတယ်။
ကျုပ်တို့ဆရာကြီးက သင်တန်းဆင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။ - ငါကတော့ မင်းတို့ကို ငါ့အတွေ့အကြုံတွေကို တခုမချန်သင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဥာဏ်နဲ့သာယှဉ်ပြီးသာ အလုပ်လုပ်ကြပါ။ လောကကြီးက မာယာတွေများသလို၊ မင်းတို့လည်း ပညာသားပါပါနေကြပါ။ ဒါပေမယ့် တို့ဘ၀တွေက အစိုးမရဘူး။ ဘယ်လောက် သတိတွေနဲ့နေနေ၊ မမြင်ရတဲ့ အနီးကပ်ရန်သူတွေကြောင့် အချိန်မရွေးကျဆုံးသွားနိုင်တယ်။ ကျဆုံးသွားရင်လည်း ၀မ်းနည်းစရာမဟုတ်ပေဘူး။ တို့ဘ၀ကိုက ဒီလို ပြဌာန်းထားလို့ဖြစ်တယ်။ မင်းတို့ဟာ စားရလွန်းလို့လည်း အရမ်းဝမ်းမသာရဘူး။ မစားရမသောက်ရလို့လဲ ၀မ်းနည်းပြီး မကြေကွဲရဘူး။ - ရီရသေးတယ် တစ်ချို့တွေက ကိုယ့်ဝမ်းစာကိုယ်ရှာတဲ့အလုပ် စလုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေနေတဲ့ အခန်းကိုချပေးပါဆိုပဲ။ ကျုပ်ကတော့ နေရာမရွေးပါဘူးဗျာ။
အခုနေတဲ့အခန်းကို ကျုပ်လိုက်လာတုန်းက ခေါင်းအုံးဖုံးကြားမှာနေပြီး ကပ်လိုက်လာတာ။ အဲဒီအခန်းက ကျောင်းသားက ခေါင်းအုံးဖုံးစွပ်တော့မယ်ဆိုတော့ ခေါင်းအုံးဖုံးစွပ်ကို ဟိုလှန်ဒီလှန်ကြည့်တော့ကာ ကျုပ်ပိန်လှီလှီကို တွေ့ပါလေရော။ ကျုပ်ကလည်း အဲဒီတုန်းက သင်တန်းဆင်းကာစ၊ စားရမယ့်အလုပ်ကို စရောက်စ၊ ဘာမှမစားရသေးတော့ ပိန်လိုက်တာလွန်ပါရော။ ကျုပ်ကို ဖမ်းပါလေရော။ ရင်တွေတုန်၊ ခေါင်းနားပန်းတွေကိုကြီးလို့။ ဆရာကြီးပြောတဲ့ သဗ္ဗေသတ္တာ၊ကံမ္မသကာ ဆိုတာဒါပဲပေါ့ တွေးနေရတာ။ မောင်ကျောင်းသားလက်ထဲမှာ အဖမ်းခံထားရတုန်းမှာ သစ္စာတွေဆိုပေါ့။ -ကျုပ် သူများအသွေးအသား မစားရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ နောက်တော့မှ စားမှာပါ။ ဒီမှန်သော သစ္စာစကားကြောင့် အသက်ဘေးမှ လွတ်ကင်းရပါစေ၏။- ကျုပ်သစ္စာဆိုတာကပဲ အစွမ်းထက်တာလား၊ ဟိုလူကြီးပဲ မေတ္တာဓာတ်များသလား မသိဘူး။ ကျုပ်ကို အမှိုက်ပုံနားချထားသွားပါလေရော။ ပျော်လိုက်ရတာဗျာ။ အသာလေးငြိမ်နေရတာပေါ့။ ပြီးမှ လွတ်ရာ၊ကင်းရာကို ပြေးရတာ။ ဒီလိုနဲ့ အသက်ဆက်ရှင်နေရတာ။
ကျောင်းသားတွေနေတဲ့ အခန်းမိုလို့လားသိဘူးဗျာ။ ရှုပ်ပွနေတာပဲ။ ကျုပ်လိုကောင်တောင် မျက်စိနောက်တယ်။ ညလည်း အိပ်တယ်မရှိဘူး။ နားကြပ်ကြီးတွေတပ်၊ ကွန်ပြူတာဆိုတာကြီးရှေ့မှာ တတွတ်တွတ်စကားတွေကပြော။ နားတွေကိုငြီးလို့။ အော် ကိုယ့်ကံကိုက မကောင်းတာကို၊ ဒီတော့လည်း သူတို့အိပ်အောင်စောင့်၊ ပြီးမှ နံရံကနေအသာလေးကပ်သွားရင်သွား၊ ပျင်းတဲ့အခါဆိုလည်း နံရံကိုပတ်လျှောက်မနေတော့ဘူး၊ ကျုပ်နေတဲ့ ဟိုးအပေါ်ကနေ ခုန်ချလိုက်တာပဲ။ လုပ်ရတဲ့အလုပ်က ဒီလို၊ ညသူတို့အိပ်ချိန်မှာ သူတို့ဆီကို အသာလေးကပ်၊ကျုပ်မှာပါတဲ့ ပြွန်လေးနဲ့ ဆေးရည်တွေ သူတို့အသားထဲ အသားလေးထိုးထည့်၊ ပြီးမှ ကိုယ်လိုချင်တာကိုစုပ်ထုတ်ယူရတာကိုး။ အဲ သူက ကျုပ်ဆေးထိုးထည့်တာကို သိလို့တော့ မဟုတ်ဘူး၊ သူဟာသူ ယောင်ယမ်းပြီး၊ လက်ရမ်း၊ခြေရမ်းလုပ်ရင် သတိဘယ်လောက်ရှိရှိ၊ ဆူနာမိနဲ့တွေ့သလိုခံသွားရမယ်ဗျ။ လှိုင်းပုတ်တာက တော်ဦးမယ်။ လက်ရမ်းတာမိရင် အသက်နဲ့ ခန္ဓာ အိုးစားကွဲတော့တာပဲ။ ကျုပ်ရှေ့တင် ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေမနည်းတော့ဘူးလေ။
အခန်းထဲမှာပဲနေရတာကြာတော့လည်း ပျင်းလို့ တခြားအခန်းကိုသွားတာ၊ ဟိုမှာ ဘော်ဒါ အော်စကာတွေနဲ့တွေ့ပြီး၊ တညအိပ်လိုက်ပါလေရော။ မိန်းကလေးတွေနေတဲ့အခန်းတဲ့။ ကိုယ်ကလည်းအခုမှ မိန်းကလေးတွေနေတဲ့အခန်းကိုရောက်ဖူးတာလေ။ ဒါနဲ့ ညနေကျောင်းပြန်အလာကို စောင့်၊ လှလိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေ။ ဒါပေမယ့်ဗျာ အခန်းထဲရောက်တော့ အ၀တ်တွေ ချွတ်၊ အ၀တ်တန်းပေါ် ပစ်လိုက်တာ၊ မစ် တွမ်တီနိုင်းနဲ့ ထုနေသလားအောက်မေ့ရတယ်။ ကံသီပေလို့ မမှန်တာ။ ကိုင်း ဒီညတော့စားဖူးပြီပေါ့ဆိုပြီး ဆေးပြွန်လေးနဲ့ထိုး၊ စုပ် ၊ ထူးပါဘူး။ လူကလူပါပဲ။ ခေါင်းအုံးနားက ဖြတ်လျှောက်တော့ လိုအင်တွေမပြည့်လို့ အကြံဥာဏ်များနေသလား၊ ခေါင်းထဲမှာများ အတွက်အချက်ပက်စက်နေသလားမသိပါဘူး။ ပိုပူနေသလိုပဲ။ သူငယ်ချင်းအချို့တွေက ကျောင်းသူတွေအခန်းမှာနေရတာ ပိုကြိုက်သတဲ့။ ကျုပ်ကတော့ မ-စော်နံလို့နေနိုင်ပါဘူးဗျာ။ ကိုယ့်အကျင့်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့လေ။
အဲ ကျောင်းသားတွေနဲ့နေလို့လဲ ကံဆိုးနေခိုက်ဆို သတိနဲ့သာနေပေတော့။ ဖမ်းပြီး ခုံပေါ်တင်၊ ခုံပေါ်မှာ အပြေးခိုင်း၊ ကျုပ်ကို ကားလုပ်ပြီး မောင်းတာတဲ့။ ကြောက်တော့ ပြေး၊ မောလို့ မနားနိုင်ဘူး။ လွတ်မလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပြေးရတာလေ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေမနည်းပါဘူး။ သွေးစွန်းအနီကွက်ကွက်တွေတွေ့တိုင်း ကြေကွဲရပါတယ်။ ရင်ထဲကိန်းနေတဲ့ အမုန်းတရားလည်းပိုပြီး ကြီးထွားလာရပါတယ်။ လောကသဘာဝအရ ကိုယ့်အစာကိုယ်ရှာစာတာ၊ ဘာတွေကို အမြင်စောင်းတယ်မသိဘူး။ သူတို့အမျိုးတွေထဲက ခိုးဆိုးညစ်ငြမ်း၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့လူတွေကို တပြားမှ မတန်အောင်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပေးလိုက်တဲ့ ဥပမာတွေ။ သူခိုးကြမ်းပိုးတဲ့။ ကျုပ်ရင်အနာဆုံးက အဲဒါပဲ။ ခွန်အားဗလကအစ၊ ဥာဏ်ပညာအဆုံးသူတို့နဲ့ယှဉ်မရတဲ့ ကျုပ်တို့ကိုပုတ်ခတ်တာလေ။ ကိုင်း သူခိုးကလူကိုပြန်ပြီးသူခိုးလို့ဟစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကြမ်းပိုးလဲ ကိုယ့်ကို သူခိုးလို့ဟစ်တာငြိမ်ခံ၊ သဘာဝပေးတာဝန်အရ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် သူများသွေးခိုးစုပ်နေရဦးမှာပဲလေ။
Posted by ဇနိ at 2:57 PM Links to this post3comments
Posted by ဇနိ at 5:11 PM Links to this post5comments
Posted by ကိုလူအေး at 12:56 AM Links to this post5comments
၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက် မှသည် ယနေ့ ၂၀၀၈ ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက် လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၆၀) ရှိခဲ့ပါပြီ။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် အသက်သွေးချွေးများပေးဆပ်ခဲ့ကြသော ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မြန်မာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း နှင့် တကွ အခြားတိုင်းရင်းသားများကို နှစ်(၆၀)ပြည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ အိုးဝေ တစ်ဖွဲ့သားလုံးက ဦးညွတ်အလေးပြုပါတယ်ခင်ဗျား။
Posted by tmn at 10:03 AM Links to this post0comments
Posted by မောင်ဖြူ at 6:52 PM Links to this post0comments
ကျောင်းသာတစ်ယောက် လပတ်စာမေးပွဲမှာ သူ့ရဲ့ရမှတ်က သုညဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ အတန်းပိုင်ဆရာမဆီကိုသွားပြီး သူ့ရဲ့ရမှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးတာပေါ့…
ကျောင်းသား။ ။ ဆရာမခင်ဗျား ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေလွှာမှာ သုညပေးထားတာ ဘာလို့ပါလဲ။ ကျွန်တော့် အဖြေတွေအားလုံးမှာ အမှားတစ်ခုမှ မပါပါဘူး။
ဆရာမ။ ။ ဟုတ်တယ်…မင်းအဖြေတွေအားလုံးမှန်ပါတယ်….ဒါပေမယ့် မင်းက ကိုယ်တိုင်မဖြေပဲ မေရီဆီကနေ ကူးချထားတယ်ကွ။
ကျောင်းသား။ ။ အဲဒါ အမှန်ပါပဲ… ဆရာမ ဘယ်လိုသိတာလဲ။
ဆရာမ။ ။ အိုး….သိတာပေါ့ကွ… မင်းရဲ့အဖြေတွေနဲ့ မေရီရဲ့အဖြေတွေအားလုံးနီးပါးက အတူတူပဲလေ။ ဒါပေမယ် နံပါတ်ခုနှစ်က အဖြေပဲ မင်းတို့နှစ်ယောက်မတူကြတာ။ နံပါခုနှစ်ရဲ့အဖြေကို မေရီက…”ကျွန်မ မသိပါဘူး” လို့ဖြေထားတယ်။ မင်းကကြတော့ ”ကျွန်တော်လဲပဲ မသိပါဘူး” လို့ဖြေထားတယ်။
Posted by tmn at 2:56 PM Links to this post0comments